Skype WiFi Waxay Isku Dayi Doontaa Adduunka
Email & Fariin VoIP
Waa maxay Skype WiFi?
Skype ayaa bixisay meelo WiFi ah oo ku baahsan adduunka
Skype WiFi waa adeeg ay bixiso Skype taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku xirto xogta Skype iyo taleefannada kale ee VoIP iyo fiidiyoowga, iyo isticmaalka kale ee internetka, qalabkaaga mobile meelo badan oo adduunka ah. Skype ayaa sheeganeysa in ay jiraan hal milyan oo hotspots ah kuwaas oo bixiya shabakadahooda iska ilaalinta bixinta daqiiqda.
Sida Skype WiFi u shaqeeyo
Inta aad ku socoto dhaqaaqa, waxaad ku xiran kartaa internetka iyada oo loo marayo mid ka mid ah meelaha ugu badan ee ay Skype bixiso (qandaraasyo). Waxaad bixineysaa adoo isticmaalaya credit credit. Waxaa laguu soo dirayaa daqiiqad si toos ah adoo Skype ah oo aanad haysan mulkiilaha goobta WiFi. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ku xiran tahay shuruudaha iyo shuruudaha hawlwadeenada shabakada, oo ah xiriir aad la soo bandhigi doono marka aad dooraneysid oo aad ku dhex galeyso shabakada. Laga yaabe, tani waxay ku jiri doontaa xayiraad ku saabsan isticmaalka shabakada, guud ahaan isticmaalka mamnuucida isticmaalka caddaaladda, tusaale ahaan.
Waxaad u Baahantahay
Shuruudaha waa sahlan. Waxaad u baahan tahay qalabka gacanta - laptop, netbook, casriga, kiniinka - kaas oo taageera WiFi .
Markaa waxaad u baahan tahay barnaamijka Skype WiFi oo ku socota casrigaaga ama kiniinka. Waxaad ka soo dejisan kartaa Google Play for Android (version 2.2 ama ka dib) iyo Apple App Store for iOS. Ilaa hadda, ma jiraan wax app for BlackBerry, Nokia iyo platforms kale. Laptops iyo netbooks, Skype WiFi waxaa loo heli karaa Windows, Mac OS X iyo Linux. Haddii aad haysato qaybta ugu dambeysa ee Skype ee mashiinkaaga, adeega horeba waa loo dejiyey oo la heli karaa. Haddii kale, ka dibna cusbooneysii Skype.
Ugu dambeyntiina, waxaad u baahan tahay Skype credit si aad u bixiso kharashyada ku saabsan isku xirka aad isticmaashid. Sidaas awgeed waxaad rabtaa inaad hubiso inaad haysatid deyn kugu filan oo aan ahayn wicitaanada laakiin sidoo kale xiriirka.
Mar kasta oo aad u baahatid WiFi, furi app (adigoo isticmaalaya casrigaaga ama kiniinadaada) ama tag qaybta WiFi ee barnaamijka Skype ee kombiyuutarkaaga (Tools> Skype WiFi on Windows). Daaqad ayaa furi doonta soo jeedinta shabakadaha kala duwan ee la heli karo, ama midkale oo aad ku jirto, qiimaha. Waxaad dooraneysaa inaad isku xirto. Waqtiga caadiga ah ee internetku waa 60 daqiiqo, laakiin waxaad u bedeli kartaa laba jeer ama saddexdii jeerba. Markaad sameysid, kala tag riix hal taabasho ama taabasho.
Xusuusnow qiimaha oo samee qaar ka hor inta aanad bilaabin si aad uga fogaato cabsida markaad eegto deynkaaga. Markaad isku xirto, laguma soo dallaci doono isticmaalka xogta, laakiin daqiiqad kasta oo aad isticmaasho. Tani waxay ka dhigan tahay inaad soo dejin karto oo aad wax u dhigi karto wixii aad rabto - email, YouTube, surf, wicitaanka video, wicitaanka codka iwm - iyada oo aan walwal laga qabin tirada badan, laakiin kaliya waqtiga ku saabsan. Waxay halkan ka caawinaysaa in la ogaado xawaaraha isku xirka shabakada, sababtoo ah ma rabto inaad ku biirto shabakad leh xaddidan hooseeya, sida waqtiga waa lacag.
Yaa u baahan Skype WiFi?
Waxaan qabaa in dadka intooda badan aysan u baahnayn Skype WiFi. Isticmaalayaashu waxay yeelan doonaan xiriirkooda gurigooda ama xafiiska WiFi, kuwaas oo lacag la'aan ah. Marka ay ku jiraan socodka, waxay isticmaalaan 3G. Sidoo kale, dadka ku nool magaalooyinka waaweyn waxay u badan tahay inay leeyihiin meel WiFi ah oo bilaash ah oo aan u baahnayn. Inkastoo inteena badani aan ka fekereynin hayso appka, waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido leh xaaladaha soo socda:
Waxaad ku socotaa socdaal. Waxaad gaadhay garoon diyaaradeed, saldhig tareen ah ama meel kasta oo nambarkaaga gacanta ah aan la isticmaalin (waxaad ka maqan tahay shabakada, oo aadan bixin kharashka roaming), iyo halka aad mar dambe aadan lahayn shabakadaha 3G ama 4G . Kadibna, si dhammeystiran ayaad u gooyaa aduunka oo dhan. Xitaa ma sameyn kartid wicitaanada gacanta. Skype WiFi way ku caawin kartaa adiga oo kugu maraya iyada oo loo marayo mid ka mid ah martigeliyeyaasha lacag bixinta. Waad wici kartaa wicitaanada xitaa xarumaha guryaha.
Ma lihid qorshe xogeedka 3G oo aad ubaahan tahay isku-xirnaanta. Mid ka mid ah goobaha WiFi ee Skype ayaa ku caawin kara.
Ma lahan telefoon - waxaana jira sababo badan oo macquul ah oo aan fiicneyn oo aan lagugu soo wicin. Waxaad isticmaali kartaa kumbuyuutarka la qaadi karo iyo Skype WiFi si aad ula xiriirto.
Sidoo kale waa xaqiiqo ah inaadan ka helin shabakad la heli karo meel ama xaalad aad u baahan tahay adeegga. Gelitaanka internetku wuu ka duwan yahay qaybaha kala duwan ee adduunka.
Waa maxay Kharashyada
Barnaamijka laftiisu waa bilaash. Adeegga waxaa lagu dalacayaa qiimaha kala duwan oo ka mid ah hotspot ilaa hotspot. Xaqiiqdii dhab ahaantii ma haysatid doorasho ku salaysan qiimaha, sababtoo ah shabakadda aad isku xiri doonto waxay ku xirnaan doontaa meesha aad joogto iyo waxa la heli karo. Shabakadaha qaar waxay qiyaastaan ​​5 senti daqiiqadii halka kuwa kale ay ka badan yihiin toban jeer. Laakiin guud ahaan qiimaha ayaa ka hooseeya waxa ka mid ah qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya shabakada. Sidoo kale hubi lacagtaada qiimaha qiimaha - ha u qaadan wax walba oo aad ku jirto dollarka.
Sida Loo Isticmaalo Dhammaan Teleefannadaada Gurigaaga Adeegaaga VoIP
Dib u eegida Viber App
Wicitaanadaadu ma Amaan yihiin Wareegtada ama VoIP?
Kumbuyuutar ku samee kumbuyuutarkaaga
Sida Loo Helo Wicitaanada Wicitaanka Gacanka
Aqoonsi Wicitaan ah
Sida loo rakibo Viber for Android
Bilaabidda VoIP - Waxa aad u Baahantahay
Codka Codka ee VoIP
Isticmaalida Awooda Awoodda Gawaarida sida Generator
Waa maxay faylka MP3?
Ku Faraxsanyihiin Luqada Barnaamijka Apple ee Swift
Ciyaaraha Guddiga Waxaad ka ciyaari kartaa Facebook
Iska tirtir wejiga shred vs tirtirka iyo tirtirka: Maxaa kala duwan?
Aragtida iyo Ka Qaybsashada Iskuduwidda Internetka ee Tiyaatarka Gurigaaga
Sidee loo Nadiifiyaa Macaamilkaaga Windows si aad u kordhiso Windows
6 Qalabka Facebook Boga Maamul kasta oo kasta waa inuu ogyahay
Waa maxay sanduuqa PSP
Ugu sareeya 7 Talo oo loogu talagalay Qorista Wanaagsan
Talooyin loogu talagalay soo-sheegista iyo ka-dhaafista spam
Sida Loo Helo Muxuu Google kuugu Yiri Waxyaabaha Loo Yabooyahay
Top 5 Ciyaarta Wii Weyn
Wax ka bedelidda Habdhaqanka Bilowga iyo Guriga ee Mac OS X
Redaction Xidhiidhka: Guerrilla Cheats - Xbox 360
Sida loo qaabeynayo qoraalka PowerPoint 2010 sawir gacmeed
Minecraft oo leh Saacad Xeerka Code
Sida loo abuuro XML Feed
Magaca Nuqul ka qaadista Shabakadda
Child of Light Dib u eegista PS4
Ma jiraa HTML Download Tag?
© 2021 so.eyewated.com